Adobe inowira muKutengesa Kugonesa neayo Akagadzirira Toolkit App | Martech Zone
Adobe inodonha muKutengesa Kugonesa neayo Akagadzirira Toolkit App
Chitatu, June 25, 2014 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Adobe's Experience Manager (AEM) uye Dhijitari Yekuburitsa Suite (DPS) inosangana kubvumidza zvikwata zvekushambadzira kugadzira, kutsikisa uye kugadzirisa zvemukati-centric mobile application Nekuti zvigadzirwa zvemuno zveAdobe zvinoshandiswa, vhidhiyo, odhiyo, mifananidzo uye zvimwe zvinofambidzana zvinogona kushandiswa pamwe chete nekuvakwa mukati analytics - pasina kukosha kwechero kusimudzira kana wechitatu-bato kutama.
Adobe yakatanga iyo Adobe Kugadzirira Toolkit.
Adobe inotyaira yekugonesa yekubvumidza uye kukanganisa kuburikidza neayo Kugadzirira Toolkit app yakagadzirwa uchishandisa DPS uye Adobe Experience Manager. Iyo yekutengesa inogonesa app inoshongedza vamiririri neinopindirana mameseji mune piritsi fomati, uye inounza kuoneka mukuita kuburikidza neCRM kusangana pamwe neSalesforce.com.
Iyo Yekugadzirira Toolkit inosanganisira kunyange CRM kusangana kuitira kuti zvirimo zviongororwe uye zvitaurwe zvakanangana nekuita kwemari kuita. Adobe iri kuzivisa mapfupi ekutengesa macircuit, kurerukirwa kwekugadzirisa, ichipa imwechete sosi yezvinhu kune vashandi vayo ine otomatiki inogadziridza uye kusundira notisi. unogona kudhawunirodha kosi yekudzidza kubva Adobe, Kupfupisa iyo Chikamu Chekutengesa.
Zvikomborero zvakakosha zvinosanganisira:
Sales Reps anogona kuwana, kupa, uye kurodha pasi zvemultimedia zvirimo kubva pamahwendefa avo.
Ndizvo anokurumidza uye nyore kutsikisa nyowani, zvigadzirisw zviwanikwa kune rese network ye reps.
Zvakakosha kutengesa zvinhu zvese zviri munzvimbo imwechete, zvinogara zviripo, uye zvinogara zvakadaro inowanikwa kunze kwenyika.
Ndizvozvo inosanganiswa neCRM saka vashambadziri vanogona kuona zviri kusangana nevatengi uye kunatsiridza zvemukati zvekuita zvirinani.
Uku ndiko kuchinja mutambo mumaonero angu. Iyo yekutengesa inogonesa nzvimbo yakanyanya kudyiwa neyechitatu-bato mapuratifomu ayo anoda zvemukati kutama uye kugadzirwa kwemuno. Adobe iri kupfuura izvi zvechitatu-bato maturusi uye inogonesa iyo yekuchengetedza, kugadzirisa uye kuendesa yekutengesa chibatiso kubva kune iye mugadziri, kuburikidza neAEM mvumo maitiro, uye zvakananga mumaoko echikwata chekutengesa.
Tags: kupiswaadobe dpsAdobe Chiitiko Manageradobe kugadzirira toolkitCRMdigitaalinen kutsikisa suitedpskugadzirira toolkitKugonesa Kugonesa
FirehoseChat: Saiti Chat Yakabatanidzwa neMac, iPhone uye iPad